Baybalka Pentecost (Shavuot) ee Kitaabka Quduuska ah
Diinta & Ruuxnimada Baybalka
Iidda Bentakostiga, Shavuot, ama Iiddii Toddobaadyada ee Kitaabka Quduuska ah
Bentakosto ama Shawwuot waxay leedahay magacyo badan oo Kitaabka Quduuska ah (Iiddii Toddobaadyada, Goobta Beeraha, iyo La'aanta Primterruits). Shacwadu waa maalin qurux badan oo lagu mahadnaqayo oo lagu soo bandhigayo hadhuudh cusub oo ah xilliga kuleylka xagaaga ee Israel.
Magaca "Iiddii Toddobaadyada" waxa la siiyay sababtoo ah Ilaah wuxuu ku amray Yuhuudda Laawiyiintii 23: 15-16, in ay tiriyaan toddoba toddobaad oo buuxa (ama 49 maalmood) laga bilaabo maalinta labaad ee Kormarista, dabadeedna hadiyado cusub oo loogu deeqo Rabbiga sida qaynuun joogta ah.
Shawwuot wuxuu asal ahaan ka ahaa dabbaaldegga muujinta mahadcelinta Rabbiga ee barakada beergooyska. Sababtuna waxay ka dhacday dhammaadkii Iiddii Kormarista, waxa ay heshay magaca "Firstterrugs." Dabbaaldegga ayaa sidoo kale ku xiran sida loo bixiyo Tobanka Amar , sidaas darteedna magaca Matin Torah ama "bixinta Sharciga." Yuhuuddu waxay rumaysanyihiin in ay ahayd waqtigaan waqtigaa in God siiyey Tawreed dadka oo ay u mariyeen Muuse Buur Siinay.
Bentakostiga waxa loo dabaaldagayaa maalintii kow iyo tobnaad Kormarista, ama bisha lixaad ee Cibraaniga ah ee Sooman (May ama Juun).
â € ¢ Eeg Kitaabka Quduuska ah ee Joogtada ah ee Taariikhda Bentakostiga.
Xasillinta Toddobaadka ama Bentakostiga waxa lagu diiwaan geliyay Axdiga Hore ee Baxniintii 34:22, Leviticus 23: 15-22, Sharciga Kunoqoshadiisa 16:16, 2 TAARIIKHDII 8:13 iyo Yexesqeel 1. Qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee Axdiga Cusubi waxa uu ka hadlayaa maalinta Bentakostiga ee kitaabka Falimaha Rasuullada , cutubka 2.
Bentakostiga waxa sidoo kale lagu sheegay Fal 20:16, 1 Korintos 16: 8 iyo Yacquub 1:18.
Dhamaan taariikhda Yuhuudda, waxa ay caado u ahayd in ay ku hawlan tahay barashada habeenkii ah ee Tawxiidka habeenkii hore ee Shawwoot. Carruurtu waxaa lagu dhiirrigeliyay in ay xusuustaan ​​Qorniinka oo lagu abaal mariyo daaweynta. Buugii Ruth waxaa si caadi ah loo akhriyey inta lagu guda jiray Shavuot.
Maanta, si kastaba ha ahaatee, badan oo ka mid ah caadooyinka ayaa ka tagay oo muhiimadeeda ay lumisay. Fasaxii dadwaynaha wuxuu noqday mid ka mid ah falanqaynta culus ee suxuunta caanaha. Yuhuudda dhaqameed weli waxay shumacayaan iftiin iyo akhriyaan barakooyinka, qurxinta guryahooda iyo sunagogyada leh cagaarnta, cunaan cuntooyinka caanaha, baro Tawxiidka, akhriya buugga Ruth iyo tagaan adeegyada Shawuot.
Ciise iyo Bentakostiga
Xagga Falimaha Rasuullada 1, ka hor intaan Ciise la sara kicin samada, waxa uu xertiisa u sheegi doonaa hadiyadda Aabbaha ballanqaadka ah ee Ruuxa Quduuska ah , oo dhawaan la siin doono iyaga oo ah qaab diineed oo awood leh. Wuxuu iyaga ugu sheegayaa inay sugaan Yeruusaalem ilaa ay helayaan hadiyadda Ruuxa Quduuska ah, taas oo awood u siin doonta inay u soo baxaan adduunka oo ay noqdaan marqaatiyaal.
Dhowr maalmood ka dib, maalinta Bentakosto , xertii oo dhan ayaa wada jira, markii dabayl xoog leh oo samada ka soo degay, oo afafka dab ku shiday iyagii. Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay, "Dhammaantood waxay ka buuxsameen Ruuxa Quduuska ah waxayna bilaabeen inay ku hadlaan afaf kale sida Ruuxu u suurtageliyey." Dadku waxay arkeen munaasabaddaan waxayna maqleen iyagoo ku hadlaya luqado kala duwan. Wayna yaabeen, oo waxay u maleeyeen inay khamri cabbayeen. Markaasaa Butros kacay oo wuxuu wacdiyey Boqortooyada Weyn ee Boqortooyada, 3000 oo qof ayaa aqbalay farriinta Masiixa.
Isla maalintaas waa la baabtiisay oo waxaa lagu daray qoyska qoyska Ilaah.
Buugaagta Falimaha Rasuullada waxay sii wadaan inay qoraan mucjisooyinka ku jira Ruuxa Quduuska ah ee bilaabay Bentakostiga. Mar labaad waxaan arki karnaa Axdiga Hore oo muujinaya hooskii waxyaalihii Masiixa ku iman lahaa! Markaasaa Muuse wuxuu u kacay xagga Buur Siinay oo waxaa ku xigay Afartankii Siidoon. Markii Yuhuuddu aqbaleen Tawreed, waxay noqdeen addoommo Ilaahay. Sidoo kale, ka dib markii Ciise u kacay xagga jannada, Ruuxa Quduuska ah ayaa la siiyay maalintii Bentakostiga. Markii xertii heleen hadiyaddii, waxay markhaati u ahaayeen Masiixa. Yuhuuddu waxay u dabbaaldegeen soo goosashada farxada Shavuot, kiniisaduna waxay u dabaaldegtay goosashada ilamaha cusub ee Bentakostiga.
Xaqiiqooyin badan oo ku saabsan Bentakostiga
Shawwuot waa mid ka mid ah saddexda heegan ee xajka markii dhammaan ragga Yuhuudda looga baahan yahay inay soo hor jeedaan Rabbiga hortiisa Yeruusaalem.
Hal aragti oo ku saabsan sababta ay Yuhuuddu sida caadiga ah u cunaan cuntooyinka caanaha sida cheesecakes iyo shinniotka shinjiga ee Shavuot ayaa ah in sharciga la barbar dhigo "caano iyo malab" Kitaabka Quduuska ah. Akhri wax dheeraad ah .
Dhaqanka qurxinta daaqsinka ee Shavuot wuxuu ka dhigan yahay goosashada iyo Tawreed ee tiir ahaaneed "geedkii nolosha."
Sababtoo ah Shavuot wuxuu dhacayaa dhamaadka sanad dugsiyeedka, sidoo kale waa wakhti caan ah oo lagu hayo xafladaha xaqiijinta Yuhuudda.
Wax badan oo ku saabsan Bentakostiga .
Injiilka Marka loo eego Mark, Cutubka 6aad
Aayadaha Kitaabka Quduuska ah
Ciise Wuxuu Bixinaa Shanta Bawlos: Loaves iyo Kalluun (Markos 6: 30-44)
Hordhaca Kitaabka Matayos
Kitaabka Qudduuska ah ee Iskutallaabta Ciise
Kitaabka Quduuska Ah Ee ku Saabsan Jacaylka Ilaah
Cutubka ugu Sucuudiga ee Kitaabka Quduuska ah
Muuse iyo Tobanka Amar - Soo Koobida Kitaabka Quduuska ah
Barnaamijka Barnaamijka Barnaamijka Maktabadda
Goorma Muujinta Injiilka Markuu Qoro?
Baybalka iyo Cibaadada
Thomas Edison: Waa horyaal tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Sida Loo Horumariyo Koob A of Crystal Needles Quick
Boqorka Leonidas ee Sparta iyo Battle ee Thermopylae
Waagii hore ee ciidanka
Himilada ku tiirsanaanta
Meelaha Georgia ee O'Keeffe
Jaamacadda John Hopkins University OpenCourseWare
Tusaalooyinka dhammaystirka GRE-ga
Maxay tahay Rugta Sharciga ah?
Talo-siinta Shahaadada iyo Xiriirka Xirfadaha Buugaagta Christian-ka
Ma Ku Caawin Karka Ma Ku Fiican Yahay?
Miyuu Albert Einstein aaminsan yahay nolosha kadib dhimasho?
Sida loo ciyaaro DADGAD Tuning
Qeexitaanka Qeexitaanka iyo Tusaalooyinka
Maahmaahyadii Talyaaniga Bilaabay "C"
Hagaha Waalidiinta Waxqabadka
Badbaadinta Aadanaha, Badbaadada Badbaadada: Muujimooyinka Muujiya ee Waqtiga Waddooyinka
British Ladies Winners Championship Amateur Championship
Daabacaadaha Daabacaadda fudud
Taariikhda iyo Style of Shaolin Kung Fu
Macluumaadka Dhibcaha Chemistry AP
Sida Loo Weydiiyo Sawirta Sawir
Saamaynta Gaarka ah ee Gemstone
Dagaalkii Dunida ee Badda